We She Me: မိန်းမကြိုက်
ဇနိ - 7/20/08, 9:43 PM
ဒီလိုလဲ ဖြစ်နိုင်တယ် ကိုအန်ဒီ..
မိန်းမတွေက ကွန်မန့်ရေးတော့ ယောက်ကျားတွေက လက်ရှောင်နေတာဖြစ်မယ်..
တကယ်က ခင်ဗျား ရေးတာတွေကို ယောက်ကျားတွေလဲ ကြိုက်ကြပါတယ်..
imaginary-clouds-no2 - 7/20/08, 11:56 PM
ကျနော့် အမြင်ကတော့ ခင်ဗျားရေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက လက်တွေ့ဆန်တယ် ။ အချက်အလက်အတွေ့အကြုံစသဖြင့် လက်တွေ့ဘဝထဲကအကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ် ။ ထမင်းဟင်းချက်တာ နဲ့ ၁ ရာခိုင်နူန်းနဲ့ မသက်ဆိုင်လောက်ပါ ။ ကျနော်လဲ ချက်တာပဲ ။ (((တိန်))))
khin oo may - 7/21/08, 12:17 AM
မိန်းကလေးတွေက အပြင်မထွက်ရလို. ဘလော.ထဲ အချိန်ကုန်များတဲ.သဘောပါ. ယောက်ကျားလေးများက တော. ဘလော.ထက် စိတ်ဝင်စားစရာတွေ များတယ်လေ။ (တိန်)
Anonymous - 7/21/08, 12:31 AM
:P hee hee... I think.. the sayings of miss aundy is right... သက်သာလ
Anonymous - 7/21/08, 12:32 AM
really hope to read.. myan myan byo
pandora - 7/21/08, 1:34 AM
တွေးတတ်ပါပေ့ ကိုယ့်ဆရာ ကိုယ်တို့ကိုရော ဘယ်သူပိုကြိုက်ပါလိမ့်
ဝေတိုး - 7/21/08, 3:02 AM
မိန်းမဆန်တယ်လို့ကျမကမထင်ဘူး။မိသားစုကိုသံယောဇဉ်ကြီးပြီးနွေးထွေးတတ်တဲ့စိတ်ရှိ တဲ့အမျိုးသားကိုတဖက်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ခင်မင်စိတ်ဝင်လွယ်တာပေါ့။ရုပ်ရှင်ထဲက မိန်းမလျာကြီး ပြောတာမှန်တယ်ပြောလို့ ရပေမဲ့ တကယ်ကယောက်ကျားမိန်းမသတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်သာနွေးထွေးတတ်တဲ့လူကိုမိန်းမဆန်တယ်ဆိုတာကိးု။ ဒါဆိုအေးစက်ပြီး ဘာကိုမှသံယောဇဉ်မထားတတ်တဲ့ကျမသူငယ်ချင်းတယောက်ကိုယောက်ကျားဆန်တယ်ပြောမလား။ ဒီBlog ကမိသားစုအကြောင်းတွေများပေမယ့် ကျမအတွက်တော့ တကယ့် Reality show ကောင်းလို ပညာလဲရ၊ entertainment လဲဟုတ် ဖြစ်စေတာ ကိုAndy ရဲ့ အရေးအသားရော တင်ပြပုံညက်တာရော လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့စကားပြေ အပြင် နောက်တချက်က ကိုAndyရဲ့ response တွေမှာ professionalism အပြင် warmthပါတွေ့ရတာ။ ကျမယောက်ကျားကဒီBlogကိုနေ့တိုင်းလာတာ။ဖတ်သူသက်သက်ပဲလေ။comment မပေးဖြစ်တဲ့သူလိုလူတွေအများကြီးရှိမှာသေချာပါတယ်။မျှော် ကို မျှော်နေ တယ်ဗျို့။
Ko Paw - 7/21/08, 3:51 AM
ဟာဗျာ....ကွန်မင့်ရေးရတာ လက်တွန့်အောင် လုပ်နေပြန်ပါပြီ။
အခြား - 7/21/08, 12:09 PM
ဟဟ... ကိုဇနိ o-way မှာ ညွှန်းထားတာတွေ့လို့ လာဖတ်တယ်။ Title ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားလို့။ ဟီး... အမြင်သစ်တွေရလိုက်တယ်။ နောက်တင်မယ့် Post တွေကိုလည်း လာအားပေးဦးမယ်။ အခြားက... ယောက်ကျား .... :P
May Moe - 7/21/08, 7:53 PM
ကျွန်တော် မီးဖိုချောင်ထဲ ၀င်လုပ်တာ သူမ သက်သာလို့ပါတဲ့။ တိန်...
ဟီး အဲဒါ အမှန်ဆုံးပဲ :P
Anonymous - 7/22/08, 8:12 AM
ဟင်းချက်နည်းတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကွန်မင့်မရေးဖြစ်တဲ့ ယောက်ကျားကြိုက်အုပ်စုထဲက တစ်ယောက်ပါခင်ဗျ၊ gentleman ဆန်တာကို ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုမလား၊ သိမ်မွေ့တယ်ပြောမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ယောက်ကျားဆန်တယ်လို့ ယူဆရမလား၊ ကိုအင်ဒီကို ယောက်ကျားအချင်းချင်း ဒီထက် မချီးကျူးပါရစေနဲ့ဗျိူ့။
sawphonelu - 7/22/08, 10:51 AM
ယောက်ျားလေး တွေ ဘာ ကြိုက် ......
မဇနိ - 7/22/08, 11:48 AM
မိန်းမဆန်တဲ့ ယောက်ျားတော့ ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူးနော်။ စိတ်ထားနူးညံ့တဲ့သူ၊ စာနာမှုရှိတဲ့သူလို့ ထင်မိတာပါ။ ချစ်ခင်စာနာတတ်တော့ မီးဖိုမှာ ၀င်ကူတာတွေ ရှိလာတယ်။ နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုဖြစ်လာတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ မိန်းမဆန်တယ်ပြောပြော အဲလိုလူမျိုးပဲ လက်တွဲချင်ပါတယ်။ တိန်!
Andy Myint - 7/24/08, 2:10 PM
ယောက်ျား စာဖတ် ပရိတ်သတ်က ကျွန်တော်လိုပဲ နေမှာပေါ့ ကိုဇနိ။ ကျွန်တော်လည်း တော်ရုံတန်ရုံ ကောမန့် ရေးခဲတယ်။
ဒီလို နားလည်ပေးတာ ကျေးဇူးပဲ မောင်တိန်။
ဟုတ်တယ် မခင်ဦးမေ။ ယောက်ျားတွေက ဘလောက် ဖတ်ဖို့ စိတ်မရှည်ဘူး။ ကျွန်တော် အပါအ၀င်ပဲ။
မဝေတိုးရေ.. ကျွန်တော်တော့ မြောက်သွားပြီ။ Reality Show လိုမျိုး ဆိုတာကို သဘောကျတယ် ဟီးဟီး .. ပါးစပ်တောင် မပ်ိတ်နိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်လည်း စေတနာထားရေးပါတယ်။
ဒီလောက်ရေးရင် ကျေးဇူးတင်နေပြီ ကိုပေါ။
အခြား နောက်လည်း အခြားပို့စ်တွေ လာဖတ်ပါဦး။
ဟုတ်တယ် စာဖတ်သူ.. ယောက်ျားတွေက ချီးမွမ်းခဲတယ်။ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားချင်းဆို ပိုခဲတယ်။
ကိုစောရော ဘာကြိုက် ..
မဇနိ ဘာကြောင် ကိုဇနိကို့ ကြိုက်…. တိန်
စိုးထက် - Soe Htet ! - 7/31/08, 11:39 PM
တိန် က ကို အန်ဒီ ရဲ့ မူပိုင် ဖြစ်မယ် ... သိပ်မကွာဘူး ဗျ ဟိ :P
Andy Myint - 8/4/08, 9:39 PM
`တိန်´ က ကာတွန်း ဇော်မောင်လား အော်ပီကျယ်လား မသိဘူး... တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ စကားပါ ကိုစိုးထက်
Anonymous - 11/26/10, 12:47 AM
ကျွန်တော်လည်း...ကိုအင်ဒီရဲ့..ပရိသတ်တစ်ယောက်ပါ..အစ်ကိုတင်တဲ့ post တွေကိုကြိုက်ပါတယ်...ဒါပေမယ့်..comment တော့မပေးဖြစ်လောက်အောင်ကိုပေးခဲပါတယ်..
ယောက်ကျားလေးမီးဖိုချောင်ထဲဝင်တယ်ဆိုတာကတော့..ဟင်းကောင်းကောင်းကိုယ်တိုင်ချက်စားရတာဝါသနာပါလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..မိန်းမစိတ်ရှိတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး...ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို..ကိုယ်တက်နိုင်တဲ့ဖက်က..ကူညီရာလည်းရောက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော..မီးဖိုချောင်ထဲယောက်ကျားလေးတစ်ယောက်ဝင်တာနဲ့..မိန်းမစိတ်နည်းနည်းဝင်နေတယ်ဆိုတာကတော့..ကျွန်တော့်တွေ့ရှိချက်အရ..လုံးဝလုံးဝ မဆိုင်ပါဘူ။ ကျွန်တော်တွေ့ဖူးပါတယ်.ယောက်ကျားရင့်မာကြီးတွေ..ရင့်လိုက်တာမှ..တော်ရုံယောက်ျား..သူတို့လောက်မရင့်နိုင်ပါဘူး..ဒါပေမယ့်..မီးဖိုးချောင်ဝင်ချက်နေတာကိုတွေ့ဖူးပါတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့..မီးဖိုချောင်တော့မ၀င်ဘူး..ဒါပေမယ့်.အတွင်းစိတ်က မိန်းမလိုပဲကောက်လိုက်တာမှလွန်ရော..အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းဖူးလို့သိတာပါ။
စာရေးတယ်ဆိုတာ..အနုပညာတစ်ခုပါ...အနုပညာကို defination ဖွင့်မယ်ဆိုရင်...အရင့်ပညာမဟုတ်လို့ပဲလို့ကျွန်တော်သိတယ်.။ အစ်ကိုစာရေးတယ်...အရေးအသားတွေက ဖတ်မိတဲ့သူ ဆက်ဖတ်ချင်အောင်ဆွဲဆောင်မှူရှိတယ်..အဲ့ဒါကိုက အစ်ကိုမှာအနုပညာမြောက်သွားပြီလေ..။ အဲ့တော့.အတွင်းစိတ်သဘောက လည်း.နုညံ့တာမစမ်းပါဘူး.....အဲ့ဒါကို..မိန်းမဆန်တယ်လို့ပြောရင်တော့....ကမာပေါ်မှာရှိတဲ့အနုပညာသည်တွေအားလုံးက မိန်မဆန်ကြတယ်ပေါ့......
စုစု - 9/25/12, 7:41 PM
ဟုတ်တယ်နော်။ သူ ဟင်းကောင်းကောင်းချက်တက်တယ် ဆိုရင်2% ၊ 3% မိန်းမဆန်နေလည်း လက်ခံလိုက်မယ်။ လက်လည်းလက်ခံလိုက်တယ်။။
Anonymous - 10/28/13, 1:27 AM
မီးဖိုချောင် ၀င်တာနဲ့ မိန်းမဆန်တယ်ပြောမရပါဘူး
ကိုယ်တိုင် ချက်စားရတဲ့ ယောက်ျား များလဲ ရှိတာပဲ
နောက်ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ အတော်ဆုံး စားဖို မှူးတွေက ယောက်ျား တွေပဲလေ
ကျနော်ကတော့ ကိုယ်တိုင် ချက်စားနေရလို့ပါဗျာ မိန်းမ ဆန်တာ မဟုတ်ပါဘူး
တိန် ( သူများတွေလဲ တိန် သွားကြလို့ ကျနော်လဲ တိန် ခဲ့တယ် )